Izizathu zokuba kutheni abantu bezishiya iinqwelo zokuthenga | Martech Zone
Awusoze ufike kwi-100% yentengiso emva kokuba umntu ongeze imveliso kwinqwelo yakho yokuthenga, kodwa akukho mathandabuzo ukuba sisikhewu apho ingeniso ityibilika. Kukho izicwangciso zokuzoba abantu babuyele kwi… ukumakishwa kwakhona yenye yazo. Amaphulo okumaketha alandela abantu emva kokuba beyishiyile inqwelo yokuthenga kunye neentengiso zentengiso kubo njengoko betyelele ezinye iisayithi. Ukubuya kuhlala kuyinto entle kumaphulo okuthengisa kwakhona.
Nangona kunjalo, kunjalo emva Baye balahla… njani malunga phambi kokuba bayashiya? Ukubonelela ngoluhlu lweminqweno, ukuhanjiswa simahla, iindleko zangaphambili kunye nezinye iindlela onokuwenza umahluko kwindlela abantu abaguqula ngayo. Idatha evela kwi-comScore ihlanganisiwe kule infographic evela eMilo, Akukho nqwelo yasekhohlo ngasemva: Kutheni abathengi bengalandeli okuThengiweyo kwi-Intanethi.
Ubugcisa bokuthenga ngefestile abulahlekanga kubathengi abakwi-Intanethi. Uphando lubonisa inani elibalulekileyo labathengi abakwi-Intanethi ngokuzalisa abagcwalisa iinqwelo zabo kodwa bazilahle ngomzuzu wokugqibela. Yintoni egcina aba bathengi ukuba bangahambi yonke indlela? Sijonge kwisifundo esitsha nge-comScore ukufumanisa.
tags: ukulahlwaukuguqulwaukuguqulwa kokusebenzaeCommercekwi-infographicmiloisikhoji sokuthengaUkulahlwa kwinqwelo othengela kuyo
MyCurator: Umxholo wokuLungiswa kweWindowsPress